စာရေးဆရာမ ထက်ရည် (Brand You) ရဲ့
တန်ဖိုး - ၄,၅၀၀ ကျပ်
Eaint ဒီနေ့ပြောပြပေးချင်တဲ့စာအုပ်လေးကတော့ ဆရာမ"ထက်ရည်" ရဲ့ "အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်" ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။????????????
စာအုပ်လေးထဲမှာအဓိအားဖြင့်အပိုင်းသုံးပိုင်းပါပါတယ်။ Exploring Me ရယ်၊ Designing Me ရယ်၊ Mature Me ရယ်။အဲ့ကမှသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းအသေးလေးတွေထပ်ခွဲထားတာပါ။????????????‍♀️
စာအုပ်ထဲမှာကိုယ်ကြိုက်လို့ highlight တားထားတွေတော့အများကြီးပါပဲ။အဲ့ထဲကတချိုဟာ​လေးတွေကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။????
>>ကောင်းမွန်တဲ့ပုံရိပ်ကိုတည်ဆောက်ချင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်က Know your worth လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ်နားလည်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။(ဆရာမထက်ရည်)
>>Self image ကိုဖော်ပြနေတဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုက Little voice ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြောတဲ့အသံသေးသေးလေးတွေပါ။(ဆရာမထက်ရည်)
>>လုပ်စရာရှိတာမြန်မြန်သွက်သွက်လုပ်၊ဘဝမှာမဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်၊မသွားဖူးတဲ့ခရီးတွေသွား၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်ပြန်တုန်လှုပ်စေမဲ့ Challenge တွေလုပ်၊စိတ်ပျက်စရာလူတွေကိုဘဝထဲကထုတ်၊ကိုယ်သေသွားတဲ့အခါဘဝမှာတစ်ခုခုတော့ကောင်းတာလေးတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသိလေးနဲ့သေရဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။(ဆရာမထက်ရည်)
Publisher Name: ပီတိအိမ်